Endrik'io pejy io tamin'ny 29 Novambra 2018 à 11:39
104 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Novambra 2018 à 10:56 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 29 Novambra 2018 à 11:39 (hanova) (esory)
Ny '''Tetiandro hebreo''' dia [[tetiandro]] ampiasaina ao amin'ny fivavahana jiosy sy ny fanjakan'i Israely ankehitriny. Tetiandro manaraka ny fihodin'ny [[volana]] sy ny [[masoandro]] ny tetiandro hebreo, ka ny iray volana dia miovaova ho 29 na 30 andro. Misy iray volana fanampiny izay asisika isaky ny telo taona satria tokony ho feno ny tsingerim-potoana 19 taona atao hoe Tsingerin'i Metona<ref><small>I Metona dia filozofa grika velona tamin'ny taonjato faha-5.</small></ref>. Avy amin'io tetiandro io no nahazoana ny Tetiandro jiosy izay ampiasain'ny Fanjakana Israeliana.
Raha ilaina ny hanampy iray volana dia ampiana Adar I ('אֲדָר ב) izay apetraka ao aorian'ny Shevat ny Adar II (אדר א). Ny totalin'ny andro ao anatin'ny taona iray dia mety ho 353, 354 na 355. Marihina fa ny salan'ny taona manaraka ny fihodin'ny masoandro dia maharitra 365 andro sy 1/4 eo ho eo.▼
Misy fito andro ny ao anatin'ny iray [[herinandro]] (hebreo: / shavu'a) amin'ny tetiandro hebreo. Ny andro (hebreo: יום / yom) iray dia manomboka amin'ny filentehan'ny masoandro ao amin'ny andro eo alohany (''Yom Shishi'' "andro fahenina" Zoma) fa tsy amin'ny misasak'alina. Tsy manana ny anarany manokana ny andro tsirairay fa antsoina amin'ny laharany ka ny mifanandrify amin'ny Alahady no andro voalohany ary ny mifanandrify amin'ny Asabotsy no andro fahafito. Ireto avy izyireo anaran'andro na laharan'andro ao amin'ny herinandro ireo:
# ''Yom Rishon'' / יום ראשון‬ izay midika hoe "andro voalohany" (Alahady)
# ''Yom Sheni'' / יום שני‬ izay midika hoe "andro faharoa" (Alatsinainy)
# ''Yom Shlishi'' / יום שלישי‬ izay midika hoe "andro fahatelo" (Talata)
# ''Yom Reviʻi'' / יום רביעי‬ izay midika hoe "andro fahefatra" (Alarobia)
# ''Yom '''Khamishi''' / יום חמישי‬ izay midika hoe "andro fahadimy" ('''Alakamisy''' / '''Kamisy''')
# ''Yom Shishi'' / יום ששי‬ izay midika hoe "andro fahenina" (Zoma)
# ''Yom '''[[Sabata (jiosy)|Shabbat]]''' / יום שבת‬ izay midika hoe "andro fitsaharana" ('''Asabotsy''' / '''Sabotsy''').
Ny ''Yom Shabbat'' (יום שבת‬ ) dia azo hafohezina hoe ''Shabbat'' (שבת) fotsiny na halavaina hoe ''Yom Shabbat Kodesh'' (יום שבת קודש‬) izay midika hoe "andro fitsaharana masina".
Ao amin'ny [[Baiboly]] dia voalaza fa ny taona iray misy 12 volana araka ny hita ao amin'ny [[Boky voalohan'ny Mpanjaka]] sy ny [[Boky voalohan'ny Tantara]] (1Mpan. 4.7 sy 1Tant. 27.1-15) ary ny soratra ao amin'ny [[Bokin'ny Genesisy|Genesisy]] dia hoatry ny milaza fa ny volana tsirairay dia misy 30 andro (Gen. 7.11; 8.3-4; 8.13-14). Hafa ny anaram-bolana nampiasain'ny [[Hebreo (mponina)|Hebreo]] talohan'ny fahababoana fa tsy mitovy amin'ny ampiasaina amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny dia ny laharan'ny volana ao amin'ny taona no natao anaran'ny volana. Misy anaram-bolana vitsy izay voalaza ao amin'ny Baiboly, dia ireo nogasina hoe ''Abiba'' (hebreo: אביב / Aviv), ''Ziva'' (hebreo: /Ziv), ''Etanima'' (hebreo: אֵתָנִים / Ethanim) ary ''Bola'' (hebreo: /Bul). Ny Abiba dia volana voalohany, ny Ziva no faharoa, ny Etanima no fahafito, ny Bola no fahavalo. Heverina ho avy amin'ny anaram-bolana kananita izy ireo.
Ny volalanvolana ''Aviv'' (midika ara-bakiteny hoe "lohataona") dia voaresaka ao amin'ny [[Bokin'ny Eksodosy]] sy ny [[Bokin'ny Deoteronomia]] (Eks. 12.2; 13.4; 23.15; 34.18; Deo. 16.1). Ny volana ''Ziv'' (midika ara-bakiteny hoe "fahazavana") dia voaresaka ao amin'ny [[Boky voalohan'ny Mpanjaka]] (1Mpan. 6.1; 6.37). Ny volana ''Ethanim'' (midika ara-bakiteny hoe "mahery", endrika milaza maro) dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 8.2). Ny volana ''Bul'' dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 6.38).
==== Ny anaram-bolana taorian'ny Fahababoana ====
Ireto avy ny anaran'ny volana ao anatin'ny taona iray izay heverina fa avy amin'ny [[Tetiandro babiloniana|anaram-bolana babiloniana]]:
# ''Tishri'' (hebreo: תשרי) manitsaka ny volana Septambra sy Oktobra (30 andro);
# ''Heshvan'' (hebreo: חשון) manitsaka ny volana Oktobra sy Novambra (29 na 30 andro);
# ''Kislev'' (hebreo: כסלו) manitsaka ny volana Novambra sy Desambra (30 andro);
# ''Tevet'' (hebreo: טבת) manitsaka ny volana Desambra sy Janoary (29 andro);
# ''Shevat'' (hebreo: שבט) manitsaka ny volana Janoary sy Febroary (30 andro);
# ''Adar'' (hebreo: אדר א) manitsaka ny volana Febroary sy Marsa (29 andro);
# ''Nisan'' (hebreo: ניסן) manitsaka ny volana Marsa sy Avrily (30 andro);
# ''Iyar'' (hebreo: איר) manitsaka ny volana Avrily sy May (29 andro);
# ''Sivan'' (hebreo: סיון) manitsaka ny volana Mey sy Jona (30 andro);
# ''Tammuz'' (hebreo:תמוז) manitsaka ny volana Jona sy Jolay (29 andro);
# ''Av'' (hebreo: אב) manitsaka ny volana Jolay sy Aogositra (30 andro);
# ''Elul'' (hebreo: אלול) manitsaka ny volana Aogositra sy Septambra (29 andro).
Ao amin'ny Baiboly dia ny volana Nisana (''Nisan'') no voalohany ary ny Adara (''Adar'') no faha-12. Ny ''Adar'' I izany dia volana faha-13 (30 andro) ka toyToy izao ny filaharan'ny volana ao anatin'ny taona:▼
▲Ao amin'ny Baiboly dia ny volana Nisana (''Nisan'') no voalohany ary ny Adara (''Adar'') no faha-12. Ny ''Adar'' I izany dia volana faha-13 (30 andro) ka toy izao ny filaharan'ny volana ao anatin'ny taona:
▲Raha ilaina ny hanampy iray volana dia ampiana Adar I ('אֲדָר ב) izay apetraka ao aorian'ny Shevat ny Adar II (אדר א). Ny totalin'ny andro ao anatin'ny taona iray dia mety ho 353, 354 na 355. Marihina fa ny salan'ny taona manaraka ny fihodin'ny masoandro dia maharitra 365 andro sy 1/4.
Raha ilaina ny hanampy iray volana dia ampiana Adar I ('אֲדָר ב) izay apetraka ao aorian'ny Shevat ny Adar II (אדר א). Ny ''Adar'' I izany dia volana faha-13 (30 andro).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/958579"